1. HGH inobatsira kurapa uye kurapa
2. Nhengo dzakaoma uye zvirwere zvisingaperi zvevatambi
3. HGH inobatsira kugadzirisa maronda
4. HGH inobatsira nekurwadziwa kumashure nemabvi
5. HGH kuporeswa kwepanyama kukurumidza
6. Makemikari nemaperembudzi emaperembudzi: HGH inobatsira sei mushure mekupisa?
7. Upenyu mushure me50 neHGH uye zvinoda kudzivirira zvirwere zvepfupa
HGH inobatsira kurapa uye kurapa
Arthritis, gout, chirwere cheGoff - kana iwe uchiziva mazita aya pachako, zvinoreva kuti iwe wawira muavo 30% yevanhu vanotambura nemarwere akabatanidzwa. Zvechokwadi, inenge 1 / 3 yevanhu vePasi pasi kamwechete kamwe muhupenyu hwavo vakatarisana nekuputika uye kusingaperi kwemapfupa emapfupa.
Ava ndivo varume nevadzimai vakwegura avo marakia corny anotanga kuwira pasi, asi zvinoita sekuti mamwe ematambudziko aya anoshandiswa nevamiririri vane hutano hwakanaka hwevanhu - vatambi.
Nhengo dzakaoma uye zvirwere zvisingaperi zvevatambi
Tinosangana nemitambo ine utano hwakanaka, nokuti vanhu avo vakazvitsaurira hupenyu hwavo kuti vadzidzise havana nguva yekuita tsika dzakaipa, ivo vari kunyatsocherechedza muviri wavo uye chikafu.
Zvisinei, vatambi, gymnasts nevamwe vane dambudziko rimwe chete, iro rinonzi chirwere chirwere. Kutapisa maitiro etitikiti kunounza kutambudzika kusingagumi, dzimwe nguva kudzivisa munhu mukana wekuita basa raanoda, kana kumutadzisa kuva asina simba.
Mukurapa, zvirwere zvinotevera zvinowanzoonekwa kune vavatambi:
- Osteoarthritis ndiko kuparadzwa kwekubatana kwechirwere chinokonzerwa nemashirairasi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, munhu wacho anonzwa kurwadziwa uye kusuruvara nguva dzose.
- Arthritis inzira yekuputira inowanikwa mumasumbu mushure mekukuvara. Iyo inoratidzirwa neodema, kuwedzera kwehuwandu hwema intra articular fluid, kusagadzikana panguva yekutama uye kunyange kutema.
Nzira yekuzvidzivirira sei kubva pamatambudziko akadaro? Zvisingatauri, nokuti mutambo hauna kushamwaridzana kunokonzerwa nekukuvadza, uye kudzidziswa kwakasimba kunotungamirirawo kubhururuka kwekatekete. Semuenzaniso, unofungidzika huwandu hwepamusoro apo bhasikoro uye kumhanya zvinoputika nekududzirwa kwemabviki, uye kumira kwemazuva panguva yekuvaka muviri nekureruka kunosanganisira marwadzo mumaoko.
Kunyangwe kurota kwevatambi vose - "gomo remiviri" - zvinokanganisa hutano nekuvimbika kwezvibatanidzwa. Ichokwadi ndechokuti chero kuwedzera kwehutano hwemuviri ndezveimwe mutoro wekateti uye bone. Nokudaro, vanokwidza sumo uye vanogadzira muviri vanowanzonzwa kugadzirwa kwemaitiro pavanoshandura makumbo nemaoko, uyewo vanonzwa kurwadziwa mukati mavo.
Chirwere chinotambura nekukuvara uye kuora kwemajoini ndotevera:
- Mabvi ndiyo inonyanya kunetseka chikamu chekukuvara. Bhodhi, kutamba, rhythmic gymnastics, tennis, kurwisana - MITATU yepamusoro nehuwandu hwemakuvhu, kuputira uye kuputika. Weightlifting, bodybuilding uye powerlifting ndiyo chikamu chechipiri chezvinhu zvine ngozi. Pachishanda nguva dzose, mabheti menisci anongoputika, uye nekunetseka kwekufamba, mitsipa inoputika, inokonzera mapepa kwete nechepamusoro uye pasi, asiwo kubva kune rumwe rutivi.
- Evha - nhamba yechinetso 2 yevatambi. Arthritis neArthritis yezvibatanidza zvemaoko zvinowanzotambura nevatambi vematareti, varimi vemuviri, vanofarira simbalifting, uye vanowanzova hockey vatambi. Iri sangano rakaoma kwazvo uye rinodikanwa kushandiswa kwakashata, saka kana iwe uchidzidzira mubhendi rekusimbisa nekusimudzira, kuputira biceps uye triceps kunofanira kunyatsochenjerera. Kunyangwe nekufamba kwenguva, hazvizoponesi kubva pakusiya mutsara.
- Kurwiswa Kwemapfupa emapfupa emhepo kunowanzokuvadza panguva yekurovedza tennis, ice hockey uye martial arts.
Ankles Marwadzo ari pasi pegumbo kazhinji kacho chikonzero chekukuvadza kune mitsipa uye tendon. Kakawanda mumatambi uko kune zvinoputika uye kuputika kwezvikwama, izvo zvinogara zvichitambudza hutano hwezvibatanidzwa.
HGH inobatsira kugadzirisa maronda
Zvichida wakanzwa nyaya apo vatambi vakakurumbira uye vane tariro vakatisiya mabasa avo nekuda kwekukuvara uye zvirwere zvisingaperi. Sei mazuva ano, mishonga yemashiripiti isingabatsiri kugadzirisa matambudziko avo?
Izvi ndezvokuti pane kungorapwa chete kune dzimwe zvirwere, kuvhiyiwa hakuiti nguva dzose kupa chikonzero chakanaka, uye mishonga yakawanda inongobvisa kunze zviratidzo. Panguva imwecheteyo, munhu asingazivi hupenyu kunze kwemitambo anoenderera mberi kudzidzisa zvakaoma, achiisa pachena mapfundo ake kusvikira kuparadzwa kukuru.
Zvaunofanira kuita: taura zvakanaka kune kurota kana kuita nemisodzi? Zvose zvekutanga uye zvechipiri ndezvakaipa.
Iyo yakanakisisa sarudzo - kurapwa nekukura kwehomoni.
Somatotropin - chinhu chinobudiswa nechemberi kwemazamu evanhu pituitary gland, haisi kungoporesa. Inogadzirisa zvachose zviputi zvakakanganisika uye maviri - pasina kutora mishonga yemishonga, mafuta nemafuta.
Tenga kukura kwehomoni inowanzokurudzirwa kuti iratidze. Inotanga kushandiswa kwezvakaberekwa kwemukati mumuviri, zvirongwa zvemagetsi zvinokurumidza, uye munhu anongomira kukwegura. Chinhu chimwe chete chinoitika pamwe nemasangano. Vanozvidzorera, vachigamuchira zvose zvinodiwa zvikamu kubva mumuviri.
Kana iwe ukatsanangura nzira iri paminwe, iwe unowana chimwe chinhu chinotevera. Iyo yakawanda somatotropin inobudiswa muvana uye vechiduku vane mapfupa nematukisi anoponesa nguva yekukura nokukurumidza.
Nenguva ye30, nhamba yehomoni yakaderedzwa uye cartilage inogona kungoita zvirwere kubva mumuviri. Izvo, zvechokwadi, hazvina kukwana, uye mapepa anotanga kuvhara uye "kubuda pamakumbo."
Tenga Genotropin (kukura hormone inogadziriswa) zvinoreva kupa goroti yako nekugadzirisa zvinhu. Hapana kuparadzwa - kwete kurwadziwa. Zvose zviri nyore kwazvo uye zvachose zvakasikwa.
HGH anobatsira nekurwadziwa mumashure nemabvi
Inofungidzirwa kuti kusuruvara kwemashuga mushure mekuita zvekurovedza chinhu chinowanzoitika uye kwete zvachose chinhu chinotyisa. Iyo mitsipa uye tendon dzinotambanudza kuti dzive dzakanyanyisa-saka iko kurwadziwa. Izvi zvinenge zviri zvechokwadi, asi zvakakosha kuti usakanganwe chiratidzo chemukoti kubva mumuviri wako.
Kana musana wako, mabvi nemaoko zvichikuvadza mushure mega yega sangano, mushure mezuva kusuruvara hakugoni kupera, kunetseka kunokutambudza iwe kunyange munguva yekuzorora, unofanira kutanga kutora matanho makuru. Zvose izvi zvinoratidza kuti masangano nemamwe matukisi haana simba rekugadzirisa, uye vakagamuchira kukanganisa kwakakomba.
Ko, kukura kweHommone kunoshanda sei?
- ine-anti-catabolic effect - inodzivirira mishonga kubva pane zvinoparadza zve cortisone
- inenge 200 amino acid makemikari inokonzera kugadziriswa kwemasculoskeletal system elements
- kusimbisa mapfupa emapfupa
- inokurumidza kuita basa rekugadziriswa kwemajoini nemirasi
- haibvumiri mafuta kuiswa mumatukisi, nokudaro achideredza mutoro pairi
- mafupa uye cartilage
- inowedzera basa rose rekuchengetedza muviri
- inodzivisa kuparadzwa kwemajoini nekuda kwekupfeka nekukwegura.
Kukura mahomoni ekugadzirira kunoshandiswa mune mishonga yemagariro kurapa zvirwere zvemigumisiro, mafundo nemaruva emhuka. Zvisinei, vanachiremba havatsvaki kuzivisa a panacea. Kazhinji inoshandiswa pakuwedzera kune zvakanyanya kurapa kana mumatambudziko akaoma.
Munenge chero kupi zvako munyika havatengesi majojekiti e-somatotropin munzvimbo yevanhu. Kubva pane izvi zvinotevera: kuti uve nemapfupa akabatanidza nemapfupa, unofanirwa kuvaunza kune imwe nyika yekuparadzwa (iwe unogona kupiwa mishonga yemishonga), kana kuzvitarisira iwe uye Mutemo unotenga vanhu kukura hormone zvakananga kubva kuThailand.
Chinhu chimwe chinogona kutaurwa nechivimbo: avo vatambi vanogara vachitora zvidzidzo zvekudzivirira therapy yeHGH, usasangana nemarwadzo muzvibatanidza, usatambura neArthritis uye Arthritis, kukunda kukunde usina kufunga nezvekurumidza kwebasa ravo.
HGH kuporeswa kwepanyama kukurumidza
Yeuka, pakutanga kwechinyorwa chatakaudza kuti vazhinji vezvinetso zvevatambi ndivo chikonzero chekukuvara? Iyo yakawanda uye yakaipa macro inotungamirira kuArthritis uye Arthritis. Asi zvakadini nemamiriro ezvinhu akakomba apo kuputsika, kuparadzaniswa kana kupwanya kunotyisa mazuva ano? Pano, zvakare, ichabatsira kukura hormone.
Zvechokwadi, HGH haina kukura pfupa kana tendon mumaawa 2.
Chishamiso hachizoitika mukati memazuva e3-4, asi zvisinei zvinogona kukakavhirwa: kuporeswa kuchaita kakawanda nekukurumidza uye nyore kana iwe Tenga Genotropin uye shandisa sechirwere chinogadzirisa. Izvozvo zvinodhaka zvinodzokorora kuderedza dambudziko rekudzoka zvakare nekuda kwezvinhu zvaro:
- kukurumidza kwemagetsi emagetsi
- kuwedzera protein synthesis
- kudzivirira maitiro ekurwadza
- kuchinja kwechimiro kune nzira yekushandisa mafuta sechikonzero chekuvandudzwa uye simba rinowedzera
- kushanda kwakasimba
Nyanzvi dzinokurudzira kutenga kukura hormone kwete chete kuvarwi. Njodzi uye zvirwere zvinoda kuvhiyiwa zvinogona kutora chero munhu achishamisika. Kuwedzera somatotropin therapy kuchakurumidza kushandiswa kwehutano hwemuviri zvachose:
- munhu wacho achachengetedzwa zvakavimbika kubva pamigumisiro yemishonga uye zvimwe
- zvipingamupinyi - zvinhu zvose zvakachengetedzwa masimba emuviri zvinoshandiswa
- mukati nekunze sutures ichapora nokukurumidza pamusana pekugadzirwa kwe insulini-kufanana nekukura kwe1, iyo inodzora mamiriro eganda
- chiropa chinogona kutarisana nemutoro unokonzerwa nokutora mishonga.
Iwe unogona kunge uchiziva kuti zvipembenene zvinowanika nokukurumidza paganda revana, uye mwana akagadzirira kusvetuka uye kufara pazuva rechipiri mushure mekushanda. Chikonzero cheizvi, zvakare, kuwedzera kwekugadzirwa kwe somatotropin. Newe munhu mukuru uyo ​​anogamuchira mukana wake unoshamisa wehomoni, chinhu chimwe chete chinoitika.
Makemikari nemaperembudzi emaperembudzi: HGH inobatsira sei mushure mekupisa?
Chimwe chikamu chikuru chekushandiswa kweHGH ndiko kurapwa kwekutsva uye kukurumidza kwe engraftment yeganda rekupa.
Chii chinoitika kuvanhu kana vachiwana kemikari kana kupisa kupisa?
- Inowedzera chiyero chemagetsi uye kutengesa mwoyo - hypermetabolism
- Mamiriro ezvinhu anoda mari yakawanda ye simba, iyo "inobudiswa" nekuparara kwemasumbu nematumbu, - catabolism.
- Iyo yekupedzisira, inotora, inotungamirira kune kupora kwenguva refu kwekupisa uye mamwe maronda paganda.
Muvana, izvi zvinokonzera kuderera kwekukura, izvo, zvechokwadi, gare gare inodzoka pachayo pachayo. Muvanhu vakuru, pane kupera kwakakwana kwekuchengetedzwa kwemuviri uye nguva refu yekudzorera.
Ndicho chikonzero nei HGH yakakurumbira kunekutengeserana kwemaInternet. Chiremba haakwanisi kutarisira kukurumidza kuporeswa, uye naizvozvo zvakakosha kuisa chimiro chemasabolism, kuzadza zvivako zvemukati simba uye kutanga mushonga nekura kukura iwe pachako. Utano hwako huri mumaoko ako!
Upenyu mushure me50 neHGH uye zvinoda kudzivirira zvirwere zvepfupa
Ngatidzokerei kune zvirwere zvemapfupa, mafundo nemirasi. Pakati pepakati nevatambi vezvenyanzvi, makore anoteerera zvirwere izvi. Izvo zvinenge zvakafanana zvakafanana nematambudziko akafanotaurwa: goroti rinotsvaira uye rinononoka kuparadzwa kubva pakakuvadzwa kwakawanikwa munguva yehupenyu.
Zvechokwadi, vanhu vakwegura havaiti basa, asi hapana munhu anoda kumuka uye kurara nekutambudzika mumativi akasiyana emuviri zuva rega rega. Zvisinei, chimwe chinhu chiri chido, uye chimwe chacho ndechechokwadi. Maererano nehuwandu, vazhinji vanopfuura 50% yevanhu munyika yose vanotanga kunzwa vasinganzwisisiki kumashure, maoko, makumbo uye mutsipa vasati vasvika kumakore ekurasira.
Kugadzirisa dambudziko iri uye kuwedzera simba guru pachako, iwe unongoda kutora HGH prophylactically. Kukutengesa kuIndaneti pasina chiremba, ichi chinodhaka hachiwanzoiti, kunze kwechepasi-nhengo dzepamusoro dzine chiitiko chinokonzera. Inonyanya kukosha, yakachengeteka uye inotengeswa kukura hormone munyika ino chibereko chedu kubva kuThailand. Iyo haina hutachiona hwemakemikari uye hunyoro hunoyeuchidza muviri kuti hukuru kwazvo kuti urege kukwegura.
Isa urongwa hwekutaurira zvakananga kuHGH Thailand uye kuwana mikana yakawanda pamusoro pevezera rako: kuonekwa kwekuona, hupenyu hwakanaka, kudzivirira kwehutachiona uye dzimwe zvirwere zvepfupa zvine makore.